Dhibaatada ay askarta ku hayeen shacabka oo korortay | KEYDMEDIA ENGLISH
MUQDISHO, Soomaaliya - Askarta ka tirsan ciidamada dowladda, gaar ahaan kuwa taagan wadooyinka caasimadda, ayaa dhibaato ba'an ku haya shacabka, gaar ahaan darawalada gaadiidka raaxada iyo kuwa mootooyinka bajaajta.
Darawaladan ayaa sheegaya, in maalin walba ay bixiyaan lacago laaluush ah, oo ay doonayaan askarta wadooyinka magaalada taagan, taas oo si qasab ah looga qaado.
Kuwa ka dhaga adeega in ay dhiibaan lacagta, ayaa loo geystaa jirdil iyo handadaad, iyadoo qaarkoodna laga xareeyo gawaaridooda, kadib markii lagu eeddeeyo in ay yihiin argagixiso, isla markaana la tuhmayo.
Dhalinyarada mootooyinka Bajaajta ku shaqeysta, iyo kuwa wata gadiidka raaxada, ayey caqabadan ku keliftay, ay gaadiidkooda iska xareeyaan, maaddaama aysan awooddin in maalin walba ay laaluush ku bixiyaan lacag gaareysa $20 dollar.
Labbo ka mid ah darawalada Bajaajta ayaa bishii la soo dhaafay, naftooda ku waayey wax ka yar labbo dollar, oo ay weydiisteen askar ka tirsan dowladda, ee taagan waddooyinka, waxaana weli gacanta lagu heynin, askartii dhallinyaradas dishay, taas oo ah arrin ay shacabka Muqdisho aad u hadal hayaan.
Wal walkan ay shacabku dariska la noqdeen, ayey ugu biirtay tii amni xumo, iyo caqabadii ka heysatay xirnaanshaha jidadka muhiimka ah, waxaana dowladda Soomaaliya ay u muuqataa, mid iska indho tirireysa dhibaatada ay shacabku wajahayaan.